Mety ho lakilen’ny fampitsimbadihana ny politika tratra aoriana ao Afovoany Atsinanana ve ny fikatrohana hiaro ny zon’ny LGBTQ+? · Global Voices teny Malagasy
Nanakana ny fandrosoana ihany koa ny fanilikilihana ara-tsosialy
Voadika ny 11 Novambra 2021 3:55 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, srpski, عربي, Ελληνικά, English
Nopihana avy amin'ny horonan-tsary YouTube nogadraina tao Ejypta noho ny fanandratana ny saina avana, avy amin'ny Human Rights Watch.
Avy amin'i Camille Arquette
Raha firenena maro manerana izao tontolo izao no mampihatra hatrany ny politika sy ny fomba fanao misakaiza amin'ny LGBTQ, mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izany kosa ny firenena sasany any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA).
Any Ejipta ka hatrany Torkia sy hatrany Iran, mihemotra manohitra ny fampiatiana ny LGBTQ+ ireo governemanta ao MENA, no sady mampiasa media sosialy sy finday hanaraha-maso sy hikendrena ny vondrom-piarahamonina. Nanakana ny fandrosoana ihany koa ny fanilikilihana ara-tsosialy. Eny indrindra, tandindomin-doza lehibe ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ any Afovoany Atsinanana ary tsy maintsy manery ireo governemanta ao MENA ireo mpiaro ny zo iraisam-pirenena mba hanova ny politikan'izy ireo hamoronana fiaraha-monina mampiaty kokoa tsy misy tahotra sy fampahoriana.
Na dia miovaova isaky ny firenena ao amin'ny faritra MENA aza ny votoatin-dalàna momba ny LGBTQ, manana lalàna henjana manohitra ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ny ankamaroan'ny firenena, aro amin'izany no nolovaina tamin'ny fahefana mpanjanaka toa ny Frantsay sy Britanika. Fanampin'izany, nametraka lalàna manohitra ny firaisana ara-nofo eo amin'ny mitovy fananahana na ny fanehoana ny maha mpanova fananahana (transgender) mifototra amin'ny fandikana ny lalàna Sharia ny firenena sasany. Nahatonga izany ho sarotra hatrany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ hametraka sy hitazona sehatra iombonana sy azo antoka ireo rafitra momba ny lalàna sy ireo fanilikilihana ara-tsosialy efa misy manodidina ny maha-pelaka na transgender ao amin'ny faritra.
Tamin'ny raharaha malaza iray tany Ejipta, nosamborina i Sarah Hegazy, feminista queer Ejiptiana rehefa avy nanangana saina avana nandritra ny fampisehoana iray tao Kairo tamin'ny taona 2017. Nalefa tao amin'ny Facebook ilay sary ary nozaraina imbetsaka, ary nisarika ny sain'ireo mpitsikera sy mpanohana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+. Andro vitsy taorian'ny nielezan'ny sary, niditra an-tsehatra ny governemanta Ejiptiana, nisambotra an'i Hegazy noho ny “fidirany tamin'ny vondrona voaràra izay mikendry ny hitsabaka amin'ny lalàm-panorenana.” Nodinihin'ny governemanta ihany koa ny sary tamin'ny fampisehoana. Nanagadrana mpijery fampisehoana am-polony hafa izay nanangana ny sainam-pireharehana ihany koa izany, ary koa ireo olom-pirenena noheveriny ho pelaka na mpanova fananahana. Nohazonin'ny governemanta am-ponja nandritra ny telovolana mialoha fitsarana i Hegazy. Nandritra izany fotoana izany, nampijalian'ny manampahefana Ejiptiana tamin'ny alalan'ny fandoroana herinjiro sy natokana irery izy. Nampirisika ireo voafonja hafa koa izy ireo mba hanafika sy hampijaly azy. Taorian'ny famotsorana azy, dia nifindra an-tsesitany tany Toronto i Hegazy saingy indrisy fa namono tena izy ny taona 2020.
Nanomboka tamin'ny fampisehoana, nanatontosa hetsika fisamborana faobe ihany koa ny governemanta Ejiptiana
Ao anatin'ity fanentanana ity, namorona kaonty hosoka tao amin'ny sehatra fihaonan'ny mitovy fananahana ny manampahefana Ejiptiana ary nampiasa izany mba hamandrihana ireo olona pelaka.
Malaza amin'ny famonoana olona LGBTQ+ ny any Iran, misy hatrany ny fanaraha-maso ny sehatra media sosialy. Nifindra tsikelikely nankany amin'ny Twitter, Instagram, ary Telegram ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ mba hanehoany ny fahatsapana tsy fahafahampon-dry zareo amin'ny fitondrana Iraniana. Sokajiana ho fahotana azo saziana ho faty eo imason'ny fitondrana ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy. Tamin'ny taona 2007, nihiaka ny filoha teo aloha, Mahmoud Ahmadinejad hoe: “Eto Iran, tsy manana pelaka izahay,” raha nilaza kosa i Mehrdad Bazrpash, mpikambana ao amin'ny parlemanta fa “voninahitra lehibe ho an'ny Repoblika Islamika ny manitsakitsaka ny zon'ny pelaka.” Eny tokoa, mijaly noho ny fampijaliana sy ny fanavakavahana ataon'ny manampahefana ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ao Iran.
Voaporofo fa mibahan-toerana sy matetika mihetraketraka ny famoretana ny olona LGBTQ+ ao Iran. Navela hitety ny fampiharana ara-tsosialy, toa ny Grindr sy Hornet ny manampahefana Persiana mba hanafoanana sy hamandrihana olona ho ao anatin'ny fandri-tantelin'izy ireo mampidi-doza. Ao amin'ny fampiharana tahaka ny Hotgram sy Talaeii, endrika Telegram avela hiasa ao Iran (voaràra ny Telegram tamin'ny taona 2018), afaka mijirika mora foana ao amin'ny fampiharana ny manampahefana noho ny politikany marefo momba ny fiainana manokana ary mety ho voafitaka mba hifandray amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ireo mpanorina. Manery ny maro ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ mba handositra any amin'ny firenena liberaly kokoa ny teritery sy ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana toy izany.
Nitombo ihany koa ny fihetseham-po mankahala LGBTQ+ any Torkia. Nanao fanehoan-kevitra feno fankahalana sy manambany vondrom-piarahamonina LGBTQ+ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan, mandray anjara amin'ny fitomboan'ny fankahalana LGBTQ+. Nandritra ny taona maro, noheverina ho firenena mahalefitra izay nisongadina tao amin'ny faritra MENA mpandala ny nentin-drazana ara-tsosialy i Torkia. Na dia mbola ara-dalàna aza ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy ao Tiorkia, dia nampiasa fitaovana manandanja i Erdogan amin'ny fikendrena ny vondrom-piarahamonina, mampiely ahiahy fa mety hahita firongatry ny heloka bevava fankahalana ny firenena. Niafara tamin'ny fanafoanan‘ny Netflix ny andian-tantara novokarin'ny Tiorka izay ahitana pelaka mpiantsehatra ity fikendrena ity satria nandà hanome lisansa ho an'ilay sarimihetsika ny governemanta. Ankoatra izany, tamin'ny volana jona lasa teo, nitarika fanaovana ankivy ny orinasa Frantsay mivarotra kojakoja ara-panatanjahantena Decathlon ireo fampahalalam-baovao Tiorka taorian'ny namoahan'ny orinasa ny fanambarana milaza fa mijoro miray hina amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ ny orinasa. Mihevitra ny olom-pirenena Tiorka fa natao hahavery dia ny fiarahamonina amin'ny tsy fahombiazan'ny governemanta amin'ny politika ara-toekarena sy ara-tsosialy ireo ezaka ireo.
Na dia tsy heverina ho Afovoany Atsinanana aza, tsara ny manamarika fa ao anatin'ny krizy LGBTQ+ amin'izao fotoana izao i Afghanistan, izay mizara sisintany amin'i Iran. Na dia tsy idealy nandritra ny fibodoan'i Etazonia aza ny toetry ny zon'ity vondrom-piarahamonina ity, dia nitombo izaitratra ny loza ateraky ny herisetra sy ny fahavoazana eo ambanin'ny governemanta Taliban vaovao. Talohan'ny fibodoan'ny miaramila amerikana an'i Afghanistan tamin'ny 2001, nalaza tamin'ny fampiasana ny famonoana ampahibemaso ireo olona hafahafa ny Taliban.
Satria mifehy ny firenena ny vondrona ankehitriny, mety hiverina ny toe-javatra toy izany. Araka ny tatitry ny Los Angeles Times, nanao famoretana tamin'ny ampahany maro tamin'ny mponina ny Taliban tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, anisan'izany ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+. Fanampin'izany, vao haingana no nanamafy tamin'ny fampahalalam-baovao Alemana ny mpitsara Taliban iray fa araka ny lalàna Sharia, tsy ara-dalàna ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ka hosazian'ny fitondran'ny Taliban amin'ny alalan'ny fitoraham-bato na amin'ny fandrodanana rindrina eo amin'ilay olona voampangan'ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, maro ireo Afghana queer tonga tany amin'ny fianakaviany ary nanomboka nampiasa ny findainy hifandraisana sy hifanohanana. Maro amin'ireo olona ireo no matahotra ankehitriny sao horaofin'ny Taliban ny fitaovan'izy ireo ary hampiasa ny torohay hitany mba hihazàna ireo Afghana queer hafa.
Trano avo be nirehitra loko avana nandritra ny Herinandrom-Pireharehana Tel Aviv, Israel, 2015. Sary avy amin'i Edgardo W. Olivera (CC BY 2.0).
Na dia eo aza ny fivoaran'ny zon'ny LGBTQ+ any amin'ny ampahany sasany ao amin'ny faritra, dia mbola mijaly ny vondrom-piarahamonina. Any Israely, firenena iray tena voataonan'ny antokom-pivavahana ny governemanta ao aminy, dia nandroso be ny mpanao lalàna tamin'ny famaliana ny filàn'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+. Ao amin'ny faritra amin'ny ankapobeny, niasa tsy nitsahatra hitakian-jò ireo mpikatroka. Eny tokoa, ohatra mamirapiratra amin'ny tanjaky ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+ i Tonizia, nahomby tamin'ny fanerena ny governemanta hampitsahatra ny fisavam-body fanao isan-taona hanenjehana ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy.
Na dia dingana mandroso aza ireo ezaka ireo, mbola manjaka ny lalàna manameloka ny firaisan'ny mitovy fananahana. Miantehitra hatrany amin'ny teknolojia ny manampahefana ao amin'ny governemanta mba hamantatra, hanara-maso ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Tahaka ny nataon'ny vondrom-piarahamonina tany Tonizia, tsy maintsy manohy manery ny governemanta ao amin'ny faritra MENA ireo mpiaro ny zon'ny LGBTQ+ iraisam-pirenena mba hanova ny politikany. Hanatsara ny toe-draharaha ho an'ny LGBTQ+ ny politika toy izany, manome fiarovana sy fahalalahana ho an'ny vondrom-piarahamonina, ary hampiato ihany koa ny lamina mihemotra miharihary ao amin'ny faritra amin'izao fotoana izao.
Mpanolo-tsaina momba ny fampihorohoroana iraisam-pirenena i Camille Arquette, miaraka amin'ny tombotsoan'ny zon'ny LGBTQ+
Tiorkia 3 ora izay